Rudo rwaAlejandra | Zvazvino Zvinyorwa
Belen | | Vanyori, Nhetembo, dzakawanda
Mufananidzo uyo nhetembo dzakapfuura zvese kutaura nekunyarara. Mukadzi akagadzira chiito nyama pachayo, kutsvaga kunzwisisa chimwe chinhu chaigara chiri pamusoro pezvose. Kunyarara uye neshoko, mune nyanduri anga ari akachena shuwa, kudzamara kudzika. Mukadzi aingoda chete kusvika pasi. Chiito chega chega, mutsara wese, izwi rese, mukati Alexandra Pizarnik aitsvaga chirevo chaive chake, kunyangwe chiri pamusoro pechisingakoshi, kune chepasi chakarongwa senzira yechimwe chinhu chaisamboita kunge mubatsiri, asi chasara chete kune chakakosha. Nhetembo seicho chikuru chehupenyu. Nhetembo seHupenyu.
Uye pakati pezvese zvaaifarira, Alejandra akayambuka rudo rwake neya Silvina Ocampo. Alejandra aida Silvina semumwewo munhu. Vazhinji vanogona kutonga hukama sevabonde. Ini ndinongozvitora seyakachena, yakakwira zvakanyanya kupfuura izvo zvingatemwe nemiganhu yedudziro yebonde. Alejandra aigara achipfuura. Uye semucherechedzo wechishuwo ichi ndechekuti ndinosiya iyi tsamba, yakanyorwa muna 1972, yakanyorerwa kune iye mukadzi waBioy Casares. Ndinovimba unonakidzwa nazvo sezvandinoita nguva dzese pandino verenga zvakare.
Zuva rakasuruvara kwazvo pandakakufonera kuti usanzwa chinhu asi manzwi ekunyepedzera, asina kukodzera, anobva kuzvisikwa zvakagadzirwa nevagadziri pamberi pegirazi (cf.on Arnim).
Asi iwe, mudiwa wangu, usandikanganwa. Iwe unoziva kuwanda uye pamusoro pezvose zvandiri kutambura. Pamwe tese tinoziva kuti ndiri kukutsvaga. Iva sezvazvingaite, heino sango remimhanzi revasikana vaviri vakatendeka: S. na A.
Nyora ini, mudiwa. Ini ndoda chokwadi chakanaka chekuve kwako pano, ici-bas pourtant [pasi apa, zvakadaro]. Ini ndinoshandura ndisingadi, asthma yangu inonakidza (kupemberera ini ndakaona kuti Martha anetsekana neruzha rwekufema kwangu kwekurwara) Sei, Silvina akanamata, chero shiti inofema zvakanaka uye ini ndinogara ndakakiya uye ndiri Phaedra uye ini ndiri Anne Frank?
Musi weMugovera, muBécquar, ndakamhanyisa mudhudhudhu ndikarova. Zvese zvinokuvadza (hazvingakuvadze kana ukandibata - uye uyu hausi mutsara unobata kumeso). Sezvo ini ndaisada kuvhundutsa imba, handina chandakataura. Ndakarara muzuva. Ndakapfuura asi nerombo rakanaka hapana aiziva. Ini ndoda kukuudza aya goosebumps nekuti ndiwe chete unonditeerera. Uye bhuku rako? Yangu yakangobuda. Fomati yakanaka. Ndinozvitumira kuna Posadas 1650, uyo, ari mudiwa waQuintana, achamutumira kwaari pakati pekusemesa nekusarudza.
Ini ndakakutumiraiwo (ivo) bhuku reVenzuelan rine ini handizive chinonzi degutante [chisingafadzi] (sekutaura kwavo). Asi regai vakurongedze mumazuva gumi nemashanu. (asi kune njodzi yakanyanya)]. Ah Sylvette, dai wanga uri. Ehe ndaitsvoda ruoko rwako ndochema, asi iwe uri wangu akarasika paradhiso. Yakawanikwa zvakare uye yakarasika. Fuck iyo Greco-VaRoma. Ndinoyemura chiso chenyu. Uye makumbo ako uye, soutout (bis 15) maoko ako anotungamira kuimba yekurangarira-zviroto, zvakavezwa mune yakapfuura zvakapfuura zvechokwadi.
Silvine, hupenyu hwangu (mupfungwa chaiyo) ndakanyorera Adolfito kuitira kuti hushamwari hwedu husarare. Ndakashinga kumukumbirisa kuti akutsvode (zvishoma: 5 kana katanhatu) kwandiri uye ndinofunga akaona kuti ndinokuda PASINA MHURE Ndinomuda asi akasiyana, munoziva, handiti? Uyezve ndinomuyemura uye anotapira uye anokudzwa uye akapusa. Asi hausi iwe, mon cher amour. Ndichakusiya: Ndiri kufa nefivha uye ndiri kutonhora. Ndinoshuva dai wanga usina kupfeka, padhuze neni, uchiverenga nhetembo dzako zvinonzwika. Sylvette mon amour, ndinokunyorera munguva pfupi. Sylv., Ndinoziva kuti tsamba iyi chii. Asi ndine chivimbo chakavanzika mauri. Kunze kwezvo, kufa kuri padyo neni (kwakasviba!) Kunondimanikidza. (…) Sylvette, haisi fivha, irwo ruzivo rusingaperi rwekuti unoshamisa, wakanaka uye unofadza. Ndiitire nzvimbo diki mauri, handizokunetsa. Asi ini ndinokuda, o haugone kufungidzira kuti ndinodedera sei pandinoyeuka maoko ako kuti handife ndakabata zvakare kana iwe usingazvifarire sezvo iwe uchizviona kare, zvepabonde "bato rechitatu" mukuwedzera. Zvisinei, ini handienderere mberi. Ini ndinokutumira iwe mairaibhurari maviri e poemunculi meos - chakakomba chinhu. Ini ndinokutsvoda sekuziva kwandinoita chiRussia chimwe (chiFrench nechiCorsican zvakasiyana).
Kana ini handikutsvode asi ndinokukwazisa, zvinoenderana nezvinodiwa zvako, sezvaunoda.
Ndinozviisa pasi. Ini ndaigara ndichiti kwete kune rimwe zuva nditi zvirinani hongu.
Chenjera: iyi tsamba yako peut t'en foutgre uye ini ndichapindura à propos des [unogona kuisa tsamba iyi kumusoro wembongoro yako uye kundipindura nezve] hombe svosve.
Sylvette, iwe uri la seule, l'unique. Mais ça il faut ndichati kwaari: Jamais tu ne rencontreras quelqu'un comme moi -Et tu le sais (tout) (Et maintenant je pleure.
[Sylvette, ndiwe wega, ndiwe wega. Asi zvinoda kutaurwa: hauzombowana chero munhu akafanana neni. Uye iwe unoziva izvo (zvese). Zvino ndave kuchema]
Silvina ndiporese, ndibatsire, hazvigoneke kuva kushungurudzwa kwakadaro-)
"Silvina, ndiporese, usandiite ndinofanira kufa izvozvi."
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Rudo rwaAlejandra
Unoziva sei kuti hwaive hukama hwakachena uye kuti hwaikunda, ini handizive chii uye ini handizive chii. AP anga ari mudetembi akanaka, asi zvakare munhu uye aine akati wandei matambudziko munzira. Ngatitarisei uye chengetedza basa. Uku kudanana kwemunyori akatukwa uye nzira yake yerudo zvakatoitika.